श्रीमान् र ससुरामा मानवता हराएपछि……… – Gorkhali Dainik
आफूले भोगेको चरम यातना र शृंखलाबद्ध बलात्कारको पीडा सुनाउन खोज्दाखोज्दै उनी फेरि बेहोस भइन् । बेहोसीमै रुँदै बर्बराउन थालिन् । ‘मैले कसैको पाप त गरेको थिइनँ । मलाई यो हालतमा किन पुर्‍याए ?’ यति भन्दाभन्दै उनले हातमा लगाएको क्यानुला चुँडाइन्, ‘तपाईंहरूलाई थाहा छ, अब म आमा बन्न सक्दिनँ । नभए मेरो पेट किन काट्यो ? कसले काट्यो ? मैले के अपराध गरें ?’
उनी शान्त भएपछि पीडितका काकाले घटनाको बेलिबिस्तार लगाए । माइती घर बुंगल नगरपालिका–२ की ती युवतीको तीन वर्ष पहिला मात्रै बित्थडचिर गाउँपालिका–९ सुनकुडाका एक युवकसँग विवाह भयो । नौ महिनाकी हुँदै छाडेर आमाले अर्कैसँग विवाह गरेपछि काकाले संरक्षण गरे र उनैले २०७४ असारमा कन्यादान गरे ।
‘पहिलो वर्ष त राम्रै थियो । त्यसपछि मेरी छोरीमाथि जे भयो म कसरी बताऊँ ?’ काकाले भने, ‘दुःख गरेर हुर्काएकी मेरी छोरीलाई राक्षसहरूले दिनु दुःख दिएछन् ।’
भोलिपल्ट बिहान ससुराले गरेको सबै कुकर्म उनले श्रीमान्लाई बताइन् तर श्रीमान्ले साथ दिनुको सट्टा उल्टै ससुरालाई साथ दिए । त्यसपछि बलात्कार र यातनाको क्रम झन् हिंस्रक हुँदै गयो । ‘त्यो कुरा श्रीमान्लाई भनिसकेपछि त राक्षसहरूले झन् सास्ती दिन थालेछन्,’ पीडितले सुनाएको आधारमा काका भन्दै थिए, ‘रक्सी खाएर तीनै जना (श्रीमान्, ससुरा र नन्दका श्रीमान्) मातेर आउँथे ।
बलात्कार गर्न नदिए चुरोटले स्तन, पेट, तिघ्रा र संवेदनशील अंगमा पोल्थे । यो कुरा बाहिर भने मारिदिन्छु भन्थे । अनि तीनै जना रातभर सँगै बलात्कार गर्थे ।’
यसैबीच युवतीको पेटमा गर्भ रह्यो । दुई महिनासम्म महिनावारी नभएको थाहा पाएपछि उनका ससुराले नै तमिलनाडुको एक अस्पतालमा लगेर गर्भपतन गराए ।
‘गर्भपतन गराएकै दिन दुई जना अन्य मानिस बोलाएर पाँच/पाँच हजार भारु लिएर फेरि उसलाई बलात्कार गर्न लगाएछन्,’ पीडितका काकाले भने, ‘बाबु र छोरा ढोकामा बसेर उनीहरूलाई भित्र पठाएछन् । पीडाले छटपटाएकी छोरीले पानी देऊ भन्दा उसको मुखमा पिसाब फेरिदिएछन् ।’
जिल्ला अस्पतालकी मनोसामाजिक परामर्शकर्ता शान्ति अवस्थीले लगातारको बलात्कार र यातनाका कारण उनी गम्भीर खालको मानसिक समस्यामा परेको बताइन् । ‘उनको देह व्यापार गरेर पैसा कमाउने उद्देश्यले बन्ध्याकरण गरेको देखिन्छ । उसले भोगेको शारीरिक र मानसिक यातना सामान्य मान्छेले कल्पना गर्नै सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘नियमित उपचार पाइन् भने यो समस्याबाट मुक्त गराउन सकिन्छ तर समय लाग्छ ।
’ जिल्ला अस्पतालका डा. मिलन खड्काका अनुसार उनलाई ‘मल्टी पर्सनालिटी डिसअर्डर’ भन्ने मानसिक समस्या देखिएको छ । कुनैकुनै बेला मात्रै उनी पूर्ण होसमा आउने गरेको खड्काले बताए । ‘चरम यातना र मानसिक टर्चरपछि यस्तो समस्या हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मानिसले म को हुँ भन्ने नै चिन्दैन,’ उनले भने ।
यसरी भयो उद्धार**
युवतीमाथि २०७६ मंसिरदेखि बलात्कार र यातनाको शृंखला सुरु भएको हो । पीडित युवतीका काकाकाकी तामिलनाडुको नागापाटनममा बस्थे । त्यहाँबाट युवती बस्ने ठाउँ अग्नासी पुग्न १२ घण्टाको बस यात्रा गर्नुपर्थ्यो । नियमित चौकीदारी गर्नुपर्ने र बिदा नमिल्ने भएकाले छोरी भेट्न नपाएको काकाले बताए ।
‘छोरीको मोबाइल थिएन, साता/१० दिनमा म उसको ससुरालाई फोन गर्थें । छोरीलाई ठीकठाक छ, अहिले काममा भएकाले पछि कुरा गराइदिउँला भन्थे,’ उनले भने ।
फागुनको दोस्रो सातातिर उनले युवतीका ससुरालाई फोन गरेका थिए । मोबाइल चार्जमा राखेका बेला युवतीले देखिन् तर कुटाइ खाने डरले रिसिभ गरिनन् । बरु इँटाको टुक्राले नम्बर भित्तामा लेखिन् । ‘केही दिनपछि उनीसँगै काम गर्ने गोविन्दसिंह नामका एक भारतीयले उनको अवस्था देखेर सोधीखोजी गरेको रहेछ,’ काका भन्छन्, ‘छोरीले आफूलाई घरका मान्छेले निकै यातना दिएको कुरा सुनाइछन् ।
मेरो नम्बर दिँदै काकाको घर पुर्‍याइदेऊ भनेर सहयोग मागिछन् । गोविन्दले मलाई सम्पर्क गरेपछि मात्रै सबै कुरा थाहा भयो । पछि उसैले गाडीमा छोरीलाई म कहाँ पठाएदिएको हो ।’
फागुन २८ गते युवती सम्पर्कमा आएपछि उनी कानुनी कारबाहीका लागि नेपाल आउने तयारीमा थिए । लकडाउन भएपछि भदौमा मात्रै यहाँ आउन सम्भव भएको उनले बताए ।
‘घटना थाहा पाउनेबित्तिकै भारतको कानुन हामीलाई थाहा थिएन । चिनजानको पनि कोही छैन । अपराधीलाई नेपालमै कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो जागिर छाडेर आएँ,’ उनले भने । भदौ पहिलो साता नेपाल आएका उनले १५ दिनको क्वारेन्टाइनपछि घटनाको विषयमा प्रहरीलाई जानकारी गराएका हुन् ।
‘भारतीय नागरिकको सहयोगमा छोरीको उद्धार भएर मकहाँ आइपुग्दा शरीरभरि जताततै चोटैचोट थियो,’ उनले भने, ‘छातीमा टोकेका र चुरोटको ठुटाले पोलेका घाउहरू आलै थिए । पछि अस्पताल भर्ना गर्‍यौं ।’
अहिले प्रहरीले पीडितका श्रीमान्लाई पक्राउ गरिसकेको छ । उनले अपराध स्वीकार गरिसकेको र थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी रूपक खड्काले बताए । ‘हामी विस्तृत अनुसन्धानमै छौं,’ उनले भने, ‘अभियुक्तका रूपमा रहेका पीडितका सासू, ससुरा, नन्द, नन्दका श्रीमान् भारतमै रहेकाले उनीहरूलाई कसरी ल्याउने भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।’
Prevतिम्रै आमा बो’क्सी हो भन्दै विदेशमा कमाएको ३ लाख पैसा, महंगो मोवाइल लिएर फरार…माताको ठगी धन्दा
Nextवि.सं.२०७७ साल असोज २१ गते,ईश्वी सन् २०२० अक्टोबर ०७ तारिख बुधबारको राशिफल…!
युवतीलाई ब,ला,त्का,र गरी खा,ल्डोमा पु,र्न खोज्ने प्रहरी जवान रुपन्देहीबाट पक्राउ